MADR TOUR RECAP: FALL 2018 - Relief Aid Aid Musiibo
Dhamaadka sanad dheer, safarkeena aqoon isweydaarsiga labaad waa mid dhameystiran! Intii lagu jiray seddex bilood, waxaan ka shaqeynay dariiqayaga Albuquerque ilaa San Diego, ka dibna waqooyiga dhanka Seattle, iyo bartamaha-galbeedka illaa Wisconsin, oo aan sameyneynay guud ahaan joogitaanno 21 ah.
Shabakada MADR waxay ahayd oo kaliya laba sano, waxayna inta badan diirada saareysaa taageerida dadaallada waxqabadka ee duufaanta xagga bari iyo xeebaha xeebta. Markii aan u safarnay galbeedka, waxaan rabnay inaan fahanno musiibooyinka qaaska ah ee ay bulshooyinka soo food saartay, casharadii ay horey u soo barteen, iyo sahaminta sida shabakad isku xidhka ay u qaadi karto kheyraadka, macluumaadka, iyo sheekooyinka guud ahaan waxa loogu yeero Mareykanka.
Markay musiibo dhacdo, waa wax aan caadi aheyn inay dadku weydiiyaan sababta ay Ururka Laanqayrta Cas ugu guul darreysteen inay caawiyaan, taasoo uga dhigeysa inay ku tiirsanaadaan kuwa ugu dhow ee taageerada ah. Waxaan dhahnaa in jawaabayaasha ugu horreeya ee dhabta ahi aysan ahayn hawl-wadeenno caafimaad ama dab-damis - dhab ahaanna maahan booliska. Iyagu waa dadka sida tooska saamayn ugu leh dhulka. Safarka, waxaan adkaynay iskaashiga iyo go'aan-ka-gaarista, halkii aan ka sugi lahayn gargaarka inay xagga sare uga soo baxaan Hadaad naga maqantahay, qorsheyno inaad tababar ku martigaliso magaaladaada, ama si fudud aad u rabto inaad dib u eegis ku sameyso agabkeena, fadlan soo degso oo la wadaag qoraalka koowaad ee isbedelkeena aalad fududeeyaha. Waxaan jeclaan lahayn jawaab-celinta tan!
Aqoon isweydaarsigayagu wuxuu ku bilaabmay adoo qiraya musiibooyinka in ka badan musiibooyinka ba'an ee fowdada cimilada ama burburka kadiska ah ee kaabayaasha. Waxaan ku noolnahay masiibooyinka gumeysi iyo raasamaal maalmeed, waana musiibooyinkan nidaamsan ee aan waqtigeena ku qaadanno jawaab-celin ka dib markii ay hawadu qabowday ama ay biyuhu nadiif yihiin. Dhibaatooyinka wareegga dabiiciga ee dhulka ma ahan dhibaatada. Musiibada waa habka ay hay'addu uga faa iideysato una abuurto sinnaan la'aan. Waa qaabdhismeedka awooda ee hay'ad kali ku kalifaya gargaarka, laakiin diida inuu u qaybiyo kuwa aadka ugu baahan.
Qeexitaanka “musiibo” qaabkan, waxaan u saarnay shabag ballaadhan, waxaan la kulannay bulshooyin heerar kala duwan u diyaarsanaan, oo maskaxda ku haysay saadka hab isugeyn ah oo loo agaasimayo abaabulka kaasoo wax ka barta wixii ka dambeeyay oo dhisa barnaamijyo badbaado mustaqbalka. Waqti badan ayaan la qaadannay asxaabteena cusub si aan uga wada hadalno rajada iyo cabsida, shaqada wadajirka ah ee murugada, iyo sida ay lagama maarmaanka u tahay in horay loogu socdo xawaaraha aaminaadda - in la abuuro kombuyuutar xannaaneyn halkii ay ka ahaan lahayd dhaqan daal. Mawduuc muhiim ah oo aan wadaagnay wuxuu ahaa in “xisaabtankayagu yahay awoodayada.”
Waxaan si joogto ah u nadiifinnaa nuxurka iyo sheekooyinka casharradeenna si aan uga dhex kicinno sixir dheeri ah wadahadalkeenna. Kooxdayada isku kalsoon ayaa midba midka kale taageeray si uu u gaadho go'aanno deg deg ah, sahamin sahamin ah, farsamooyin farshaxanka Instagram ah, wadista masaafada dheer, iyo maaraynta lacagaha, dhammaantood iyagoo siinaya midba midka kale jawaab-celin wax ku ool ah isla markaana sameeynaya waqtiyo aan caadi ahayn oo lagu joojiyo dabiicadda.
Shaqadani waa culus tahay, laakiin, waxaan ku soo biirnay socdaal wadnaha oo dhan, iyo, markii aan u safarnay qaar ka mid ah maylalka 5,000, waxaa dib loo buuxiyay daryeel aad u badan iyo dhiirrigelin ay sameeyeen dadka nagu martiqaaday deegaanadooda.
Waxaan fahamsanahay in qofkasta, ayadoon loo eegeynin sida hodanka ah, cunsuriyadda, ama maal-geliyayaashu inay ku dhaqmi karaan caawimaadda labada dhinac ah nolol maalmeedkooda. Si kastaba ha noqotee, waa raasamaal, abtirsiinyo, dhaqammo gumeysi oo xanuujiya daryeelka. Maleeshiyaadka garabka midig waxay leeyihiin qaab u gaar ah oo ay ku shaqeeyaan kaalmada ay ka helaan dhibaatooyinka. Dabcan, tirakoobka ay siiyaan taageeradu waa mid ciriiri ah, ujeedkooduna yahay sidii ay awood ugu heli lahaayeen bulshada cad ee weyn.
Goobaha Grant Pass, AMA, Daryeelayaashu waxay u kariyeen dab-demiyayaashuna waxay abaabulaan u guuritaanka cadaanka, dadka dabaqadda dhexe iyo xayawaanadooda. Iyada oo ay la jiraan u ololeeyayaasha Gobolka Jefferson, waxay ka faa'iidaysteen rabitaanka dadweynaha si ay u qabtaan kuraasta badan ee awoodaha magaalada iyo heerarka degmo, waxayna ku riixayaan sharciga soogalootiga, cunsuriyadda, iyo siyaasadaha dabaqadda. Sidoo kale, MADR folx oo ka jawaabaya Hurricane Michael waxay wax ka qabatay jiritaanka League of South ee panhandle.
Isku soo wada duuboo, waxaan dhamaanteen arkeynaa dhibaatooyinka xasilloonida, guryo la'aanta la awoodi karo, luminta kaabayaasha bulshada, dhaqdhaqaaq cad oo sii kordhaya iyo bey'ad sii kordheysa. Inbadan oo naga mid ah ayaa aragnay in Gobolku ku fashilmay wax ka qabashada masiibooyinka ba'an, inbadan oo naga mid ahna waxay raadinayaan qaabab aan wax uga qabanno tooska.
Xeebta galbeed, dadku waxay ka wada hadlayaan la'aanta diyaarsanaanta hay'ad ee dhulgariirkii weynaa ee xigay ee ka dhaca San Andreas ama Cascadia qaladaadka. In kasta oo Tsunami ka dib dhulgariirku uu ku sii dari lahaa qalalaasaha, la'aanta kaabayaasha ku filan aagagga danyarta ah iyo qorshayaasha ugu yar ee daadgureynta naafada iyo dadka waaweyn ayaa la filayaa inay ka sii dari doonaan masiibada noocaan ah.
In kasta oo muuqaalkaas cabsida leh uu jiro, haddana waxaan helnay dad isu diyaarinaya beelahooda sidii ay uga jawaabi lahaayeen musiibooyinka ba'an iyada oo qabanqaabineysa dadaallada gargaarka ee isku-dhafka ah ee doonaya inay si wadajir ah wax uga qabtaan kuwa hadda socda, sidoo kale Kadib booqashadeenu waxay joogsatay, bulshooyinka qaar waxay ku kulmayeen mawduuca u diyaarsanaanta in lagu dhiso tababbarradii hore u jiray, wadaagida kheyraadka, iyo cilaaqaadyada wadajirka kahor qalalaasaha. Folx waxaan kula kulanay Chico, CA, waxay bilaabeen abaabul iyagoo ku dhisaya magaca 'North Valley Mutual Aid' waxayna xallinayaan cadaadiska waxqabadka deg degga ah iyo qorsheynta muddada fog maadaama qiiqa uu ka fogeeyo dabkii ugu halista badnaa taariikhda gobolka.
Dhinacyo badan, waxay umuuqataa inaan dhul dhumay. Waxaa naloo sheegay inay tahay xilli dambe; in bini aadamka la dhaafay. Waxaan daawanaa daruuraha madow ee ku haray bulshooyinka. Laakiin, socdaalkii waxaan la kulannay qaban-qaabiyayaal tiro badan oo horay u socda si ay ula kulmaan beddelka iftiinka leh ee ay qiyaaseen. Mid ka mid ah qaybaha ugu wanaagsan ee dalxiiska ayaa la maqlayay dad muujinaya sida ay ugu faraxsan yihiin fursadda joogsikeenna u furay in lala kulmo dadka ku nool gobaladooda oo ay yeeshaan meel yar oo midba midka kale uga wada hadlo waxyaabaha ku saabsan habeynnada ee habeenkii haaya, iyo riyooyinku haynta iyaga socda.
Shabakada MADR waxay leedahay wada hadalo ujeedo badan leh oo ay yeelanayaan kahor inta aan ka wada hadalno aqoon isweydaarsiyada mustaqbalka. Waxaan fadhiisaneynaa qaar ka mid ah su'aalaha waa weyn, waxaana na hoosaysiinay jawaab celinta fikirka leh ee ku saabsan waxyaabaha aan ka kooban nahay, wacyigelinta, iyo marin u helka. Hadda, waxaan qaadaynaa waqti in aan ka fikirno sidii aan ugu imaan lahayn qaab wanaagsan, iyada oo laga jawaabayo dhibaatooyinka iyo sidoo kale socdaalka.
Waxaan diirada saareynaa sida ugu wanaagsan ee loo gaaro go'aannada wadajirka ah, waxa ay ka dhigan tahay in si dhab ah loo xoojiyo codadka inta badan la xaqirayo, iyo sida dadka bannaanka u jooga ee inta badan caddaanka ah, dadka ku takhasusay jahwareerka ayaa awood loo siin karaa inay martigeliyaan tababbarka beelkooda, sidoo kale. Waqtigan xaadirka ah, waxaan rabnaa inaan taageerno folx si aan isugu xirno oo u kobcino beelahooda.
Waxaan uga mahadnaqaynaa kuwa ina soo qabtay, na daryeelay, oo na aaminay inaan boos yar ka qabanno beelahooda, runtiina runtii waxaan ku dhiirigelineynaa shaqada aan aragno folx-nadda inay sameyneyso. Dadku waa abaabulayaan, oo, shabakad ahaan, waxaan rajeyneynaa in aan fulinno mashaariicdaas iyo sheekooyinkaas.
La soco wixii warar ah ee intaa ka badan adiga oo hubiya bartayada internetka si aad ugu biirto liiska boostada, ama adoo raacaya annaga Instagram, Facebook, ama Twitter.
Jacayl iyo iftiin,
MADR Fall Tour Crew